DAAWO VIDEO: Muuse Biixi oo war cusub ka soo saary arinta Korneyl Caare & waxa uu ka yidhi. | HalQaran.com
Home Wararka Maanta DAAWO VIDEO: Muuse Biixi oo war cusub ka soo saary arinta Korneyl...
DAAWO VIDEO: Muuse Biixi oo war cusub ka soo saary arinta Korneyl Caare & waxa uu ka yidhi.
Burco (Halqarna.com) – Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi xilli uu Axaddii maanta ku sugan magaalada Burco ayaa waxa uu soo hadal qaaday arrinta Korneyl Caare, isagoona si kulul u weeraray iyo arrimo kale.
Haddaba hoos ka daawo Muuqaalka Muuse Biixo oo xiiso gaar ah leh:
XOG CUSUB: Madaxweyne Farmaajo oo la ogaaday in uu bixiyay amarkii ilaalada looga kaxeystay Xildhibaanada Baarlamaanka + (Ogow Ujeedkiisa)!
DEG DEG + DAAWO MUUQAAL: ”Airport-ka Berbera kama maaranto Somaliland, waa qaran dumis in saldhig looga dhigo Imaaraadka” waxa sidaa yidhi…